Ọbara | | Ọkọwa Okwu Ahụike
Ọkpụkpụ ọbara ma ọ bụ nke na-adịghị mma bụ nsogbu zuru ebe niile. Nke a na - abụkarị n'ihi sel ọbara na - agbakọta ọnụ dị ka logjam na osimiri. Nwere ike nwee mkpụrụ ndụ ọbara iri ma ọ bụ karịa na-anwa ịgafe arịa ọbara ebe naanị otu ụbọdọ ka emebere ka ọ dabara.
Kedu ka mmega ahụ si eme ka ebe nchekwa dịkwuo mma, meekwa ka ọbara gbapụta na ụbụrụ?
Ndị ọkà mmụta sayensị anakọtara ọtụtụ ihe na-ejikọta mmega ahụ na ahụike ụbụrụ, na nyocha ụfọdụ na-ekwu na ahụike nwedịrị ike ime ka ncheta dịkwuo mma. Ma gịnị ga-eme n'oge mmega ahụ iji kpalite abamuru ndị a? Nnyocha ọhụụ nke UT Southwwest nke mebere ụbụrụ gbanwere mgbe otu afọ aerobic arụ ọrụ achọpụtala usoro dị oke egwu: Mmega ahụ na-eme ka ọbara gbasaa n'ime ngalaba abụọ nke ụbụrụ metụtara na ebe nchekwa. Dika odi, ihe omumu a gosiputara na obara obara a nwere ike inyere ndi okenye aka ndi nwere ihe banyere ncheta ka ha nwegasi ike, ihe nchoputa nke sayensi kwuru nwere ike iduzi nyocha banyere oria Alzheimer.
Ọnọdụ Ọbara Nwa Gị Bụ Ihe Ga-echegbu Gị?
Ọbara Ọbara - Okwu "ọbara mgbali elu" adịkarịghị emeghasị ihe osise nke ụmụaka na-egwu egwu. Mana ọnọdụ ahụ abụghị naanị ndị okenye. N'ime ụmụaka, enwere ike ibute oke ibu, ọrịa akụrụ, ọrịa obi ma ọ bụ ihe ndị ọzọ. Ọbara ọgbụgba n'oge ntorobịa dị otú a na-etinye ụmụaka n'ihe ize ndụ maka ọrịa obi na ọrịa strok na-esote ndụ.
Ọrịa obi na-emetụta obi, akwara, akwara, na ikesa ọbara na nri n’ahụ niile. E mere atụmatụ na ihe ruru 80 pasent nke ọrịa obi niile sitere na ya bụ ọrịa na-efe efe na-esite n'ọnụ.